Isikhathi Iposi: 06-09-2021
Isikhathi seposi: 06-07-2021
Isikhathi Iposi: 05-21-2021
Izinyathelo zokuhlanza izitsha zePetri
Izitsha zePetri ekuqaleni zadalwa nguJulius Richard Petri (1852-1921), isazi sebhaktheriya esasisebenza ngaphansi kwesazi sezinto eziphilayo saseJalimane uRobert Koch, ngo-1887, ngakho-ke zazaziwa nangokuthi “izitsha zePetri”. Izitsha zePetri zibuthaka futhi zintekenteke, ngakho-ke kufanele zihlanzwe ngokucophelela futhi ziphathwe ngokunakekela. ...Funda kabanzi »
Ngenisa Umshini Owengeziwe Wokuhlunga Amathiphu Kumaklayenti Angaphezulu Adinga i-Covid-19
Manje amandla wokukhiqiza amathiphu wokuhlunga angama-3000boxes wamathiphu wokuhlunga. Njengamanje, i-HUIDA inikeza izinhlobo ezahlukahlukene zamathiphu wokuhlunga wepipette: kufaka phakathi i-10ul, 20ul, 50ul, 100ul, 100ul, 200ul, 1000ul, 1250ul, ne-5ml. Ukupakisha: Iphakethe elijwayelekile - amathiphu ayi-96 Iphakethe lezomnotho - amathiphu ayi-1000 / isikhwama. Ezobuchwepheshe Feat ...Funda kabanzi »